Ukufakwa kunye neephakeji zoQeqesho loShishino oluqala kwi- $ 99
IinkampaniInc.com zibonelela ngokuthembekileyo
kunye nenkonzo yokwenziwa ngokuchanekileyo kwiwebhu ukusuka i $ 149 nje
kunye neefizi zikarhulumente
Izibonelelo ezibandakanyiweyo kwiphakheji yakho
Ukukhangela / ukugcina indawo.
Ukulungiselela kunye nokugcwalisa amanqaku enkqubo yokuyilwa
Uluhlu lokujonga olufunekayo
Gcwalisa iKhithi yeNkampani
Inkonzo yokuFayila ngokukhawuleza - Amaxwebhu angeniswa ngobusuku okanye ngesandla asiwe kurhulumente
Ukuhanjiswa kwe-FedEx ngobusuku kuwe
Ifom yoNyulo lwe-S-Corp (2553)
Isicelo se-ID yeRhafu ye-EIN (SS4)
Ulwahlulo lweRhafu (8832)
Yakha iNqaba yakho yezeMali (i-ebook)
Faka amaxabiso ePhakheji yeNkonzo $399 $279 $149
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-US, iindleko ezongezelelekileyo zokuhambisa ziyasebenza.
Ukugqiba amaxabiso enkonzo yokubandakanya kunye iifizi zokufayilisha zikarhulumente, nceda usebenzise ixabiso lethu lesicatshulwa.
Inkonzo yokuNgenisa eyiSiseko (Iphakheji yeSilivere)
Kwinqanaba lokuSisiseko lokuNgenisa, iiNkampaniInc.com zibonelela ngenkonzo ethembekileyo nechanekileyo yokuQulunqwa kweWebhu kwiwebhu- kwaye konke oku ku- $ 149 kunye neefizi zikarhulumente. Le phakheji inikezela ngobuncinci obufunekayo ukuze wena okanye ishishini lakho lifakwe ngokufanelekileyo, kwaye lilungile "ukuqala" kwiphakheji ukuba ungathanda ukonwabela izibonelelo zokubandakanya. Imixholo yale phakheji imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ukujongwa kwegama kunye nokugcinwa kunye nemeko oyikhethileyo
Ukulungiselela kunye nokuyila amanqaku akho okufakwa
Amaxwebhu afayilishwe kunye nelizwe olithandayo
Iphakheji yamaxwebhu ehanjiswa ngeposi ephambili
Iidola ezili-149 kuphela kunye neefizi zikarhulumente
Iphakheji yokuDityaniswa ngokuBanzi (Iphakheji yeGolide)
Le yiphakheji yomrhwebi kunye / okanye umnini weshishini ofuna indlela egqibeleleyo yokubandakanya ishishini lakhe. Ukongeza kwiinkonzo ezibandakanyiweyo kwiNkonzo yokuSisiseko yokuNgenisa, iPhakheji ibandakanya:
Uluhlu lokuHlola oluBalulekileyo
Iidola ezili-279 kuphela kunye neefizi zikarhulumente
Gcwalisa iPhakheji yokuNgenisa (iPhakheji yePlatinam)
Kanye njengoko igama lisitsho, le phakheji ibandakanya konke! Le yiphakheji epheleleyo yobungcali obunzulu, usomashishini okanye usomashishini ofuna ukuthatha ishishini lakhe liye kwinqanaba elilandelayo. Le phakheji igubungela zonke iziseko, ukusuka ngokukhawuleza ebusuku okanye ukuhambisa ngesandla uxwebhu, ukubonelela ngonyulo olufanelekileyo lwe-S-Corp kunye ne-EIN kunye namaphepha ezicelo. Ezi ziimpawu ezongezelelweyo:
Ukugcwaliswa koXwebhu oluKhawulezayo (Ngokuhlwa okanye ukuHamba ngesandla, apho kufanelekileyo)
Ukuhanjiswa kweFedEx kuwe
Ifom yoNyulo lwe-S-Corporation (2553)
Inombolo yeSazisi yeRhafu ye-EIN (SS4)
Ulwahlulo lweRhafu (iRhafu) (8832)
Yakha iNcwadi yakho ye-elektroniki yeNqaba
Iidola ezili-399 kuphela kunye neefizi zikarhulumente
Iimpawu zokuNgena kunye neeNkcazo
Igama lokuKhangela kunye nokuGcina kwiNdawo oKhethe kuyo: Emva kokukhetha ilizwe onqwenela ukubandakanywa kulo (ukunyula urhulumente kukwangumbono obalulekileyo- nceda ubone iphepha lethu "ndifanele ukuba ndilifake kweliphi ilizwe?"), Kwaye usinike igama olithandayo, sizakukhangela gcina isiseko sedatha ukubona ukuba igama lakho liyafumaneka, ligcine ukuba likho. Kubalulekile ukuba ungenise igama olikhethileyo, emva koko ezimbini ezizezinye kwimeko yokhetho lwakho lokuqala olungafumanekiyo.
Ukulungiselela kunye nokuYila amaNqaku oMdibaniso: Onke amazwe afuna ukuba "amaNqaku oMdibaniso" afayilishwe kwiofisi kamabhalane welizwe elifanelekileyo- oku kubhengeza kwihlabathi ukuba "ubandakanyiwe" ngokusemthethweni.
Amaxwebhu agcwaliswe ngoRhulumente owonyulileyo: Uyazichaza-sifaka onke amaxwebhu ayimfuneko wakube uthathele ingqalelo ngononophelo, emva koko wanyulwa, ilizwe oza kuthi ubandakanye kulo.
Iphakheji yoXwebhu ihanjiswe ngeposi ephambili: Sisebenzisa iNkonzo yokuBekwa kwePosi yaseMelika kuyo yonke imbalelwano engachazwanga.
Inkonzo yeArhente ebhalisiweyo: Uninzi lwamazwe angama-50 afuna ukuba ummeli woMmeli obhalisiweyo abe kwifayile kuyo yonke imibutho okanye ii-LLC's. Ummeli obhalisiweyo uyawamkela amaxwebhu asemthethweni kwaye anokunceda kubuchwephesha ukunceda iqumrhu kunye ne-LLC ngokuzimisela ngokufanelekileyo kunye nokunceda ekuqinisekiseni ukuba onke amaxwebhu afanelekileyo agcinelwe ukugcina inkampani imi kakuhle. Ngokuhambelana, le arhente ibhalisiweyo kufuneka ifumaneke kwidilesi yendawo ebhalwe kwiirekhodi zikarhulumente ukusuka nge-9 kusasa ukuya kwi-5 emva kwemini phakathi evekini. Sinikezela ngeenkonzo ezibhalisiweyo zearhente kuwo onke amazwe angamashumi amahlanu nakwiindawo ezininzi zaphesheya.
Uluhlu lokuHlola olubalulekileyo: Njengoko igama lisitsho, olu luhlu lufanele ukuba lubunzima begolide: ikunika uluhlu lwezinto "eziyimfuneko" eziza kukunceda ekuqaliseni, ekusebenzeni nasekugcineni iqumrhu lakho lisempilweni. Ukusuka ekuqwalaseleni ubume benkampani, ukuqinisekisa ukuba uyazi ukuba zeziphi iifom ezifanelekileyo zerhafu yakho okanye iimfuno zolawulo (i-EIN, S-Corporation, njl.njl.), Ukuba kubalulekile ekusebenzeni kwequmrhu lakho, kuluhlu!
Gcwalisa iKhithi yoShishino: Ukugcina amaxwebhu asemthethweni, ukusekwa kunye nemibutho ehlelwe ngokufanelekileyo kwaye ikhuselekile kubalulekile kwishishini lakho-siyaqonda! Sikunika ikiti egqibeleleyo yokudibanisa kunye neefom ze-IRS, ziyafikeleleka, zikhuselekile, kwaye zilungelelaniswe kakuhle. Iikiti zethu ezihlanganisiweyo ziza kwityala elimnyama leatherette emnyama kunye negama lenkampani yakho ebhalwe ngokutyebileyo igolide kumqolo. Sikwabandakanya iTywina lakho leNkampani elisemthethweni eliquka igama lenkampani yakho, ilizwe kunye nomhla wokubandakanywa, incwadi yeRekhodi yeNkampani, isampulu yesampulu yemithetho yedolophu, iMizuzu yoShishino, iRejista yaBalawuli kunye noLuhlu lwamaGosa, irejista yabanini zabelo, ukhuseleko Bhalisa, Izivumelwano zabanini zabelo kunye nezatifikethi zesitokhwe esenzelwe wena. Ikhithi epheleleyo ngokupheleleyo!
Ukugcwaliswa koXwebhu ngokukhawuleza: NgePlatinam package, ufumana inkonzo yethu epheleleyo – oku kubandakanya inkonzo yethu "yokuGcwalisa amaXwebhu aKhawulezayo" eya kuthi iqinisekise ukuhanjiswa kwesandla okanye ukuhanjiswa kwenkonzo ngobusuku kuzo zonke iimfuno zakho zokugcwalisa.
Ifom yoNyulo lwe-S-Corporation: Okubandakanyiweyo kwiphakheji yePlatinam yifom yoNyulo lwe-S-Corporation (IFom ye-IRS 2553, iSahluko S seSebe) ukuba unqwenela ukuluhlula iqumrhu lakho (kukho ixesha kunye neemfuno zombutho wale meko yetax). Sikwabonelela ngoncedo lonyulo lwe-S-Corporation, ulungiselelo kunye nokugcwaliswa. Nceda unxibelelane nenye yeengcali zethu ukukunceda kumalungiselelo eS Corporation.
Inombolo yeSazisi ye-EIN: Ukuba ulindele ukuvula iiakhawunti zebhanki, ukuqesha abasebenzi, ukuthenga iiasethi ezinkulu kwigama lombutho, njl.njl., Kuyimfuneko ke ukuba iNombolo yoLwazi loMqeshi (i-EIN). Iphakheji yethu yePlatinam ibandakanya isicelo se-EIN, kwaye sikwabonelela ngenkonzo ekhawulezileyo- $ 75 eyongezelelweyo, sinokukunceda ngesicelo, usifayilishe, kwaye ufumane i-EIN kwisithuba seeyure ezingama-24
Ulwahlulo lweRhafu (iRhafu): Ukongeza kwinombolo ye-EIN, iqumrhu kufuneka lifayilishe uLuhlu lweZiko kunye ne-IRS ukuze yamkelwe, ngeenjongo zerhafu, njengeziko elahlukileyo kubanini zabelo. Sinika ifom efunekayo kwaye sinokunika uncedo ekwenzeni le fomu-thetha neengcali zethu namhlanje!
Inkonzo yeArhente ebhalisiweyo yasimahla nayo yonke iNgeniso
Yonke indibaniselwano entsha okanye iphakheji yenkampani * eneNkampaniInc.com iza nenkonzo yeArhente yaBahlali ESIMAHLA
Yintoni uMmeli wabahlali?
Phantse kuwo onke amazwe, iqumrhu okanye i-LLC KUFUNEKA NGOKUSEMTHETHWENI ukuba ichonge kwaye igcine iarhente ebhalisiweyo. Igosa elibhalisiweyo kufuneka libe ne-ADDRESS YOKWASEKHAYA ngaphakathi kwimeko apho:
Apho kugcinwa khona UBUKHO BOMTHETHO
Ukuhlaziywa kokugqibela ngoDisemba 22, 2019